Horseed micnaha uu Markhaatiyaasha Yehowah u leeyahay
Waa Maxay Horseed?
Guri ilaa guri
Cashar Kitaabka Quduuska ah
Wax dhigasho gooni ah
Kelmedda “horseed” waxay ka dhigan tahay qof hor aada meelo cusub siduu waddada ugu furo kuwa ka daba imaada. Ciise horseed oo kale buu ahaa waayo dunidaa loo soo diray siduu hawl u qabto oo waddada badbaadada dadka ugu furo. (Matayos 20:28) Maanta kuwa doortay inay Ciise raacaan baa isaga ku dayda. Kuwaasi waqtigay awoodaan oo dhan waxay ku bixiyaan inay dadka xer ka dhigaan. (Matayos 28:19, 20) Qaar waxay awoodeen inay hawsha horseedka ka qaybqaataan.
Horseed waa mid waqti buuxo hawsha wacdiga qabto. Markhaatiyaasha Yehowah oo dhan warka wanaagsan bay wacdiyaan. Laakiinse qaar baa qorsheeyay noloshooda siday si joogta ah horseed u noqdaan. Horseed joogta ah 70 saacadood buu bil kasta wacdiyaa. Siday horseed u noqdaan kuwo badan baa saacadaha ay shaqeeyaan dhima. Kuwana waxaa loo doortay inay noqdaan horseedyo gaar ah siday u aadaan meelaha ay ku yar yihiin wacdiyayaasha Boqortooyada. Kuwaas bil kasta 130 saacadood ama in ka badan bay hawsha wacdiga qabtaan. Horseedyada waxay ku qanacsan yihiin inay lacag yar ku noolaadaan waayo waxay og yihiin inuu Ilaahay waxay u baahan yihiin oo dhan siin doono. (Matayos 6:31-33; 1 Timoteyos 6:6-8) Kuwa waqti buuxo wacdiyi karin horseed taageere bay noqon karaan. Bilaha ay awoodaan 30 ama 50 saacadood bay hawsha wacdiga sameyn karaan.
Jacaylka ay Ilaahay iyo dadka u qabaan ayaa dhaqaajiyo horseedyada. Sidii Ciise waxaan aragnaa dad badan oo si xun ugu baahan inay Ilaahay iyo qasdiyadiisa bartaan. (Markos 6:34) Haddaba waxaan haysanaa aqoon hadda caawin karta oo rajo run ah siin karta. Jacaylkay deriskooda u qabaan awgiis bay horseedyadu si gacan furaan waqtigooda iyo tabartoodaba u bixiyaan siday dadka kale warka wanaagsan u baraan. (Matayos 22:39; 1 Tesaloniika 2:8) Markay sidan yeelaan iimaankooda baa kordha oo Ilaahay bay u dhowaadaan barako weyn baana ka timaado.—Falimaha Rasuullada 20:35.
Muxuu yahay horseed?
Maxaa dadka qaarkood ku dhaqaajiyo inay waqti buuxa wacdiyaan?
Wadaag Wadaag Waa Maxay Horseed?